SAFFRON PEOPLE'S MOVEMENT: ပညာပါရမီ ကူညီမှု အသင်း၏ နှိုးဆော်စာ
ပညာပါရမီ ကူညီမှု အသင်း၏ နှိုးဆော်စာ
ပညာပါရမီ ပညာရေးကူညီမှုအသင်း-မှ စစ်ကိုင်းတိုင်း ခင်ဦးမြို့နယ် လက်ပန်လှရွာ ပုဗ္ဗာရုံ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း၌ ၅-၆-၇-၈ တန်း ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများကို အခမဲ့ ပညာဒါန ပြုလုပ်နေပြီ ဖြစ်ပါ၍ မိမိတို့ တတ်စွမ်းသမျှ ပညာပါရမီ ပညာဒါန ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါသည်။
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ။
ပညာပါရမီ ပညာရေး ကူညီမှုအသင်း အတွက် ကူညီ ပါရမီပြုနိုင်သော နေရာများ
Ashin Dhamma Sami
1708 Powder Mill Rd,
Email: ashindhammasami@ yahoo.com ashin.dhammasami@ gmail.com
Check နှင့်ဆိုလျှင် Pay to the Order နေရာတွင် Ashin Dhamma Sami ဟု၎င်း၊
Note နေရာတွင် ပညာပါရမီ-ဟု၎င်း ရေး၍ ပါဝင်ကူညီ ပါရမီပြုနိုင်ပါသည်။
( မိမိ ပြုလိုသော ပညာပါရမီ အကြောင်းအရာကို တပါတည်း ရေးပေးရန် )
Room No-71, K.B.P Boy's Hostel, kalina campus, Santacruz(E) ,
University of Mumbai, Mumbai-400098, India.
Email: usobhanacara@ gmail.com
ပုဗ္ဗာရုံကျောင်း၊ လက်ပံလှရွာ၊ ခင်ဦးမြို့နယ် ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ။
ရွှေကိန္နရီ သင်္ကန်းပရိက္ခရာဆိုင်- ဈေးထိပ်-အပြင်တိုက်တန်း
အမှတ် ၇ ၊ မြဇေယျာလမ်း
လှည်းတန်း၊ ကမာရွတ် ရန်ကုန်။
( ပညာပါရမီ ပညာရေး ကူညီမှုအသင်း( ၂၀၀၉-၂၀၁၀ စာသင်နှစ် )
ကျောင်းသား / ကျောင်းသူ စာရင်း
၁။ ၅-တန်း။ ကျောင်းသား-၂၀။ ကျောင်းသူ-၁၄။ ပေါင်း-၃၄။
၂။ ၆-တန်း။ ကျောင်းသား-၁၁။ ကျောင်းသူ-၁၀။ ပေါင်း၂၁။
၃။ ၇-တန်း။ ကျောင်းသား-၉။ ကျောင်းသူ-၈။ ပေါင်း-၁၇။
၄။ ၈-တန်း။ ကျောင်းသား-၉။ ကျောင်းသူ-၁၁။ ပေါင်း-၂၀။
ကျောင်းသား-၄၉။ ကျောင်းသူ-၄၃။ စုစုပေါင်း-၉၂ ။
( ပညာပါရမီ ပညာရေး ကူညီမှုအသင်းတွင် ပြုလုပ်နိုင်သော ပါရမီများ )
၁။ ပညာပါရမီ ထာဝရပဒေသာပင် တစ်ပင်
မြန်မာကျပ် - ၁၀၀၀၀
US $ ဒေါ်လာ - 10.
အိန္ဒိယ ရူပီး - ၅၀၀
၂။ ပညာရေး သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများ
ကွန်ပြူတာ စသည်၊ (သို့) တန်ဘိုးငွေ ၊
၃။ ကျောင်းသား/သူ များ၏ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ် တစ်စုံ
( ၅-တန်း ) ၂၀၀၀-ကျပ်။ US 2.00(ပျမ်းမျှနှုန်း)
( ၆-တန်း ) ။
( ၇-တန်း ) ။
( ၈-တန်း ) ။
၄။ ဗလာစာအုပ်, ဘောလ်ပင်, ခဲတံ, ပေတံ, ခဲဖျက် စသည် ပစ္စည်း ( သို့ ) ၀တ္ထုငွေ ၊
၅။ ဆရာ တစ်ယောက် အတွက် ပညာပါရမီ ထောက်ပံ့( ကျောင်းအုပ် )
( ၁-လ-၄၀၀၀၀-ကျပ်။ $ 40.
( ၁-ယောက်, ၁-လ, ၄၀၀၀၀-ကျပ်၊ $ 40. )( ၁၀-လ ၄-သိန်း။ $ 400. )
၆။ ဆရာမ တစ်ယောက် အတွက် ပညာပါရမီ ထောက်ပံ့
( ၁-လ-၃၀၀၀၀-ကျပ်။ $ 30.
( ၄-ယောက်, ၁-လ, ၁၂၀၀၀၀-ကျပ်၊ $ 120. )( ၁၀-လ ၁၂-သိန်း။ $ 1200.)
၇။ အထွေထွေ ပညာပါရမီ
၈။ ပညာရည်ချွန်ဆု ပညာပါရမီ
၅-၆-၇-၈-တစ်တန်းလျှင် ပ,ဒု,တ ၃-ယောက် ရွေးချယ်၍ အထူးဆု ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ပြီး ။
ကျန် ကျောင်းသား/သူ များအားလည်း ပစ္စည်း ၀တ္ထုငွေကြေး အခြေအနေအရ သင့်တော်သလို ဆုချီးမြှင့် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ပစ္စည်း ( သို့ ) ၀တ္ထုငွေ လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
(ကျွန်တော်တို့ တတ်စွမ်းသော သတင်း မီဒီယာ ဆိုင်ရာ ထပ်ဆင့် ဖြန့်ချီပေးခြင်းဖြင့် ကူညီ ပါရမီ ဖြည့်လိုက်ပါ သည်။)
Saffron News Letter Groups
လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတမှု ရှိမှာလား